Best 800kw Ilaa 1500kw Matoor Qaylo Hooseeya Sale Badeecada Qalabka Buufiyeyaasha Ee Low
Guriga Generator-ga Qalabka yar
Koronto dhaliyaha Hoose 800kw ilaa 1500kw ee awoodda FMW ayaa ugu weyn iyo qosol badan matoor naaftada aamusnaanta awood leh 8, 12 ama xitaa 16 dhululubooyin naaftada matoor matoor. Shaashadda dhawaaqa aan celiska lahayn ee noocan ah matoor aamusan had iyo jeer waa wax laga beddelay weel la isticmaalay ama calaamad-cusub, sidaa darteed waxaa sidoo kale loogu yeedhay sidii weel curiyaha weelka. Waa la sameeyay warshad weyn ama dhisme weyn sida suuqyada wax laga iibsado, magaalooyinka, tuulooyinka waaweyn iyo wixii la mid ah.
1. Silent Diesel Generator (800kw-1500kw)
2. Baaxadda Koronto-dhaliyaha
Cusub Ricardo, Lijia, iyo mashiinka naaftada ee taxanaha Styer
Asalka koowaad ee Stamford, Leroy Somer iyo Mecc Alte beddele
MCA-caday-cusub oo BILAASH ah beddelaad (Fasalka H, ​​IP23, AVR)
Koronto-wareejin Automatic (A.T.S) nidaamka xakamaynta
Birta culus ee birta jir leh 8 saacadood haanta shidaalka
Is barbar dhig nidaamka xakamaynta matoorka
2MM-4MM steel karamado dhawaaqa aan celcelis lahayn oo loogu talagalay koronto dhaliyaha
Haamaha shidaalka ee gaarka loo habeeyay oo ka weyn 8 saacadood ayaa socda
Qalabka ilaaliyaha amniga oo leh shabaq ilaalin
Waajibaadka culus 50 ℃ naadi Radiito
Caag culus qoyaan ka-hortagga gariirka
Deepsea7320, Smartgen6110 ama matoor ComAp AMF25 xakameeyaha
Warshadaha culus nooca aamusnaanta leh afka dabacsan
Kuleyliyaha biyaha / lub-saliidda cimilada aadka u qabow
Heer heer-sare ah waxqabadka batteriga dayactirka
Elektaroonigga sida ABB, Schneider iyo Siemens
Deepsea6020, Smartgen420 ama kontaroolaha koronto dhaliyaha ee ComAp MRS11
Caanoomiyada qarsoon ee aamusnaanta leh ee cufnaanta sare isbuunyo
Saliid hooseysa cadaadis, kuleyl badan, culeys xad dhaaf ah, iyo ilaalin badan
Qaybo gaar ah sida furaha birta-birta ah, bamka saliidda qaada, filterka boodhka iwm.
Qalabka elektiroonigga ee heer-ku-saleysan sida fiilada, korantada wareegga, dib u xajinta, laambadda, fiyuuska, aaladda joojinta.
Matoor dheeri ah iyo Bedeliyaha kale wuxuu u bareeyaa sida miiraha, gasketka, xuubka, AVR, hagaajinta.
Qalabka qalabka oo shaqeynaya Buugyaraha matoorrada, matoorrada, iyo beddeliyaha
Sanduuqa qalabka alaabada macaan oo leh noocyo qalab oo dayactir ah.
3. Shuruudaha iyo Shahaadada
4. Faa'iidooyinka Generaalkeena Diesel
① Alaabada heerka sare ah iyo dabar goynta.
● Laga soo bilaabo biraha, biraha, isbuunyada dhawaaqa, fiilooyinka, qalabka gariirka, dib u xajinta, AVR, diode, cabirrada, biinanka, ilaa silsiladda-birta, taargooyinka birta, mitirrada, kontaroolayaasha, batteriga, AMF, ATS iyo wixii la mid ah.
② Kooxda Cilmi-baarista Sare iyo Khibradda leh iyo kooxda Horumarinta
● Iyada oo leh koox cilmi baaris heer sare ah iyo koox horumarineed, kaliya maahan karaan warshada korantada FMW cabirkeeda tayada tayada leh ee lagu kalsoonaan karo laakiin sidoo kale awoodda FMW waxay naqshadeyn kartaa noocyo kala duwan oo ah gensets sida matoor super aamusan, saldhiga korantada weelka, matoor caqli leh sida ku xusan baahiyaha gaarka ah ee macmiilka.
③ Waxqabadka lagu kalsoonaan karo iyo Aasaaska
≥ Xaddiga korantada madax-culeyska kala duwan ah (95-105)% Un
≤ Heerka sharciyeynta korantada gobolka-≤ 1.0 ﹪
≤ Heerka sharciyeynta korantada kumeelgaarka ah ee gobolka -≤ + 20 ﹪ / - 15%
≤ Waqtiga soo kabashada voltatage1.0S
≤ Iskeega wareejinta Volta ≤ 0.5 ﹪
≤ Saamiga korantada-qabow-kulul heer-kulka -2 ﹪
Soo Kala Bixinta / Xawaaraha:
● Ka beddel culeyska 0-100%, Frequency / Speed ​​Droop Ratio 5% gudahood.
● Kabaxay 25-100%, rar kasta oo joogto ah Joogsi
Xaqiiqda Saameynta Telecom:
TIF (MA MG1-22) ka fiican 50
F THF (BS EN60034) kana fiican 2%
● ISO9001: Nidaamka Kontoroolka Tayada
Test La-galinta Jid-goosashada La-waafajiyay iyadoo loo eegayo GB5226.1-2002-19.3
● Difaacid-Voltage-ka la tijaabiyay iyadoo la raacayo GB7 55-2000-8.1 (oo leh 1500V illaa 60S)
Res Dhammaan aagagga korantada oo la tijaabiyo iyadoo la raacayo oo leh GB5226.1-2002-19.6
Security Mechanical Security ayaa la tijaabiyay si waafaqsan oo leh GB / T820.8-2002-6.3
Pro Cilmiga Dab-damiska oo la tijaabiyay si waafaqsan GB / T2820.8-20 02-6.4 / 6.5
Sets Dhammaan noocyada matoorrada waxaa si adag loo kormeera 25%, 50%, 75%, 100% iyo 110% Load.
matoor aamusan sanqadha dhalinta hooseysa matoor qaylo-dhaan yar 1200kw matoor aamus 1500 kva matoor hooseeya dhawaaqa hiddaha ayaa hoos udhaca
Hore : 500kw ilaa 800kw matoor qaylo hooseeya
Xiga : 3w ilaa 6kw matoor qaylo hooseeya
Mawduuca : 800kw ilaa 1500kw matoor qaylo hooseeya
500kw ilaa 800kw matoor qaylo hooseeya
Koronto dhaliyaha Hoose laga bilaabo 500kw ilaa 800kw waa midka weyn matoor naaftada aamusnaanta